Xukuumadda Soomaaliya oo cambaaraysay weeraradii kadhacay Muqdisho. – Radio Daljir
Luulyo 27, 2016 3:39 b 0
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda F. Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carteh, ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ay wax yeeladu ka soo gaartay Qaraxii ka dhacay irida hore ee Madina Gate ee Garoonka Diyaaradaha Muqdisho, Waxana uu tacsi u direy ehellada dadkii ku dhintay Qaraxa, gaar ahaan Shacabka Soomaaliyeed iyo Ciidamadda AMISOM.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa ku tilmaamay weerarkaas mid ka baxsan dhaqanka Islaamka isla markaana ay nabad-diidku ku doonayeen in lagu carqadaladeeyo hannaanka dawlad dhisidda Soomaaliya, waxana uu R/wasaare ku xigeenku tacsi u direy ehellada dadkii ku dhintay weerarka, isagoo alle uga baryay inta dhaawaca ahna in uu caafimaad deg deg ah siiyo.
“Falkaas Argagixiso ee waxashnimada ah waxaa loogu talagalay in lagu cabsi galiyo shacabka Soomaaliyeed, ee adeeg sada garoonka Aaden Cadde iyo walaalaheena Nabad ilaaliyaasha ah ee AMISOM, waxaana ka xumahay oo xanuunka an la dareemayaa intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba”ayuu yiri R/Wasaare ku xigeenka.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Carteh ayaa kormeer ku tagey Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo weerarka lala damacsanaa.